Matanho mana ekugadzirisa yako bvunzo data
Kuru Qa Matanho mana ekugadzirisa yako bvunzo data
Matanho mana ekugadzirisa yako bvunzo data
Wese muedzo anoda data kuvandudza uye kuyedza mhando yesoftware nemaapplication.
Dhata rekuyedza rinogona kugadzirwa nemaoko, nekushandisa chishandiso chekugadzira dhata kana inogona kudzoserwa kubva kune iripo nharaunda yekugadzira.
Iyi data haina kungoitika chete; inoda kutarisirwa nemazvo kuti ive inobatsira pakuyedza. Bvunzo yedhata manejimendi inogona kukamurwa kuita matanho mana:
Njere mune yako dhata modhi inodikanwa kuti ugadzire rakakodzera bvunzo dhata. Vazhinji vanoedza vane nzwisiso yakanaka yedhata ravo, asi chishandiso chinogona kubatsira zvakare kuwana iyo data yakachengetwa mudhatabhesi.
Dhata reProfile rekutsvaga zvakavanzika dhata, fungidzira kutsamira kwedata uye uwane anomalies edata kunatsiridza bvunzo yedhata.
Sezvakataurwa mune intro, bvunzo dhata inogona kugadzirwa nemaoko, nekugadzira data kana inogona kudzoserwa kubva munzvimbo dziripo dzekugadzira.
Kugadzira nemaoko kana kugadzira data zvinogoneka chete kana iwe uine matafura mashoma. Kana huwandu hwematafura huri kukura, huri kuramba huchiwedzera kuoma. Ndosaka masangano mazhinji achishandisa (100%) kopi yekugadzirwa, kunyangwe yadzo yakapera nguva.
Masangano mazhinji haadi data rese raakachengeta munzvimbo yavo isiri yekugadzira uye zviri kuvadya mari. Kushandisa subsets pachinzvimbo kunoguma nemiedzo yedatha yekuyedza iyo ine ese anodikanwa kesi dzekuyedza asi hazvizokanganisa kugona kwekuchengetedza
Bvisa Dhata Rako
Dhata rekuyedza iro rinotorwa kubva mukugadzira - rakamisikidzwa kana kwete - rinogona kunge riine ruzivo rwekuvanzika.
Kuchengetedza ruzivo rwunozivikanwa rwemunhu (PII), data rinofanira kusazivikanwa kana kuvharwa risati rashandiswa muzvinangwa sekuyedza nekusimudzira.
Dhata inogona kuvharwa nerubatsiro rwekuvhara mitemo uye yekugadzira dhata.
Iyo yakanaka data masking chishandiso inosanganisa akati wandei matekiniki ekuvaka yakakodzera masking template.
Ongorora Ongororo Dhata
Kutsvagurudza kunoratidza kuti chakakosha chikamu che software yekuvandudza nguva (kusanganisira kuyedzwa) chakarasika kumirira bvunzo dhata dzinozorodza.
Icho chikonzero cheichi ndechekuti chikumbiro chekuzorodza chiri chisina basa chakaomarara uye nekudaro chinotora nguva maitiro, sezvakaratidzwa mumufananidzo pazasi.
Nei zvichitora nguva yakawandisa? Nekuti zvinotora vanhu vazhinji! Kana Dev, Bvunzo uye QA yaigona chete kubata yavo bvunzo dhata, yakawanda nguva yaizoponeswa.
Nerubatsiro rweyedzo yedata manejimendi manejimendi, testers anogona kuzorodza yavo yega data yakatarwa kuburikidza neiyo yega-sevhisi portal. Kana iyo inogona kuve inosanganisirwa nematurusi ekushandura iyo bvunzo dhata kugovera (uye kumisikidza uye masking dhata inogona kuita otomatiki futi).
Kwayedza Dhata Management
Izvo zvakakosha kuti bvunzo dhata inowanikwa zvakanyanya uye nyore kuzorodza kuvandudza iyo nguva yekutengesa ye software yako.
Kana data rekuyedza richiwanika nyore uye vaedzo vachikwanisa kuzvizorodza nharaunda dzekuyedza, iro rese software rekutenderera rinotenderera.
Iwe unofanirwa kuve uri mukutonga kweyako data bvunzo kana iwe uchida kutanga nekuenderera kusanganisa kana kuenderera kuendesa.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve bvunzo dhata manejimendi, shanya https://www.datprof.com .
Android 9.0 chinyorwa 9 verizon
t nhare 5g vs verizon 5g
Maitiro ekutumira kana kugamuchira mari neFacebook Messenger pane iOS uye Android
Maitiro ekuziva kana yako Apple iPhone 6s ichikodzera kuitirwa yemahara bhatiri kutsiva
Deal: Yakavhurwa Samsung Galaxy S6 (T-Mobile, AT & T) ikozvino inodhura $ 399 pa eBay
Samsung Galaxy J7 Sky Pro zita rinotengeswa muUS
Verizon & apos; s nyowani Samsung Galaxy S20 5G UW yatove kutengeswa pamutengo wakakura
Tora yemahara Samsung Galaxy S9 kana S8 neiyi inoshamisa Costco / T-Mobile chibvumirano
T-Mobile Samsung Galaxy S4 uye Tab 3 vanogamuchira zvisingatarisirwi zvekuchengetedzwa
Apple: iPhone 6s bhatiri dambudziko rinobva kumhepo yakawandisa mukugadzira maitiro